Sababta Layaabka Leh Oo Ay Kooxaha Premier League-ga Uga Baxeen Tartanka European Super League-ga & Inta Isagu Soo Hartay? – Garsoore Sports
Sababta Layaabka Leh…
Sida uu warinayo wargeyska Isbaanishka ee Mundo Deportivo, runtii ma jirto guul xaq ah oo usoo hoyatay taageerayaasha, cayaaryahanada iyo tababarayaasha horyaalka Premier League-ga.
Kaddib dood muran badan dhalisay iyo dibbadbaxyo ay sameeyeen taageerayaasha, lixda koox ee Premier League-ga ugu waaweyn ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay inay dib uga laabteen xubinnimadooda koobka European Super League-ka.
Mundo Deportivo ayaa ku warantay in carada ka jirta kubbada-cagta Ingariiska, kana timid taageerayaasha, khubarada iyo ciyaartoyda aysan ahayn qodobka kaliya ee sabab u noqday in naadiyada Premier League-ga ay isaga baxaan tartankii ay lacag darteed ugu biireen ee European Super League, balse isla hungurigii ayaa markanna dhinaca kale u wareegay oo sabab u noqday soo noqoshadooda.
Mundo Deportivo ayaa ku warantay in kooxaha Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea iyo Manchester City aysan ‘hanjabaad’ iyo carada ka imaaneeysa jamaahiirta caalamka darteed aysan uga laaban tartanka Super League-ga balse waxay majaladdu ku sababaysay in ‘lacag badan’ loo soo bandhigay darteed ay uga laabteen go’aankoodii hore.
Shabbakada Isbaanishka ayaa sheegeysa in ‘lacag la taaban karo’ ay bixisay UEFA oo FA-ga Premier League-ga kaashaneysa, Iyada oo sii raacisay in dalabkani uusan wali gaarin kooxaha Isbaanishka iyo Talyaaniga maadaama UEFA ay u aragtay in kooxaha Premier League-ga ay ahmiyadda leeyihiin kuwa kalena ay isaga soo baxayaan tartankan mar haddii 50% naadiyadii uu ka koobnaa laga dhantaalay markii hore iyadoo qorshaha uu shaqeeyay oo naadiyo kalena ay soo raaceen raadka kooxaha Ingiriiska.
Waxay ugu dambeyn majalladu sheegtay in hayaanka nololeed ee UEFA uu qatar wajahay taas oo saameeyn aan wanaagsaneyn oo la taaban karo ku yeelan lahayd tartamada Champions League-ga iyo Europa League-ga.
Yaa Isagu Soo Haray Ilaa Haatan?
Halka kooxaha waa weyn ee Serie A ee Milan iyo Inter ay labaduba ka baxeen, Juventus waxa ay qaadatay qaab ka duwan sidii hore, iyaga oo sii daayay bayaan aan meesha ka saareynin laakiinay ku qiraneyso in tartanka uusan ku sii socon karin qaabkiisa haatan.
Barcelona iyo Real Madrid ayaa ah labada naadi ee wali taagan – layaab maleh marka loo fiiriyo deymihii hore iyo madaxweynahoodii ugu dambeeyay oo guddoomiye ka ah Super League-ga – wallow ay tahay in la arko bal inay ku qasbanaan doonaan inay ka baxaan iyo in kale.